China Grooved cône chinotenderera fekitari uye vagadziri | Yuantuo
Kusarudzwa kwesimbi isina simbi koni chinotenderera
1. Roller kureba kusarudzwa:
Kune zvinhu zvine hupamhi hwakasiyana, roller ine upamhi hwakakodzera inofanirwa kusarudzwa. Kazhinji, "kuendesa + 50mm" kunoitwa.
2. Kusarudzwa kwemadziro ukobvu uye shaft dhayamita ye roller:
Zvinoenderana nehuremu hweanotakura zvinhu zvakaenzana zvakagoverwa kune iwo ma roller anotenderera, verenga mutoro unodiwa weumwe neumwe roller, kuti uone kukora kwemadziro uye shaft dhayamita yeiyo roller.
3. Roller zvinhu uye pamusoro kurapwa:
Zvinoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzekuratidzira, sarudza izvo zvinhu uye kurapwa kwepamusoro kweiyo roller (simbi yakakwenenzverwa, simbi isina chinhu, yakasviba kana kuvezwa).
Chengetedzo kune chinotenderera mashandiro:
1. Usaise maoko ako netsoka pakati pemavhiri panguva yekushanda kwetambo, zvikasadaro, tsaona dzekukuvara dzinogona kuitika;
2. Zvinorambidzwa kuisa maturusi uye sundries pane waya muviri;
3. Paunenge uchiisa iyo yekushandira (yekushandisa ndiro) pamutsetse, inofanirwa kuiswa pakati pemutsara muviri zvinyoro kudzivirira kudzivirira kukuvadza chinotenderera neyakaomarara kukanganisa;
Iyo roller kugadzira uye kusarudzwa ndeinotevera:
Roller dhayamita kusarudzwa: 50mm, 60mm, 76mm
Roller zvinhu kusarudzwa: kabhoni simbi galvanizing, kabhoni simbi chrome yakanamirwa pamifananidzo, kabhoni simbi bemhapemha, PVC, Stainless simbi, musono mutopota, etc.
Roller mhando kusarudzwa: isina simba roller, imwechete ketani roller, mbiri cheni roller, "O" bhandi roller, tapered roller, trough roller.
Roller yakamisikidzwa nzira: chitubu yekudhinda mune yerudzi, yemukati mazino shaft mhando, yakazara yakazara tenon mhando, kuburikidza shaft pini gomba mhando.
Iyo roller yakakodzera kuendesa ese ese mabhokisi, mabhegi, mapallet nezvimwe zvinhu. Zvakawanda zvinhu, zvidiki zvinyorwa kana zvisina kujairika zvinyorwa zvinofanirwa kuiswa pamapallet kana kutakurwa mumabhizimusi ekudzoka. Inogona kutakura imwe chete inorema zvinhu kana kutakura yakakura kukanganisa mutoro.
Pashure: Double paburi conical chinotenderera
Zvadaro: Rabha zvemapuranga cône irikupa chinotenderera